နိုင်ငံတော်သမ္မတအာဒိုဂန်ဧဝံဂေလိတရားကိုပို့ကုန် Channel ကိုအစ္စတန်ဘူလ်မှပြင်ဆင် - rayhab ဖြစ်ပါသည်
HomeတူရကီMarmara ဒေသကြီး34 အစ္စတန်ဘူလ်နိုင်ငံတော်သမ္မတအာဒိုဂန်ဧဝံဂေလိတရားကိုပို့ကုန် Channel ကိုအစ္စတန်ဘူလ်မှပြင်ဆင်
နိုင်ငံတော်သမ္မတအာဒိုဂန်ဧဝံဂေလိတရားကိုပို့ကုန် Channel ကိုအစ္စတန်ဘူလ်မှပြင်ဆင်
09 / 09 / 2019 Levent Elmastaş 34 အစ္စတန်ဘူလ်, အထွေထွေ, ရုပ်သံလိုင်းအစ္စတန်ဘူလ်, လမ်းမကြီး, ခေါင်းစီးသတင်း, Marmara ဒေသကြီး, တူရကီ 0
ဝန်ကြီးချုပ် Recep Tayyip အာဒိုဂန်မကြာသေးမီကတူးမြောင်းအစ္စတန်ဘူလ်စီမံကိန်းကိုအလိုတော်ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်! flash ကို Kulislerdeki Channel ကိုအစ္စတန်ဘူလ်ဟုဆိုကာပြီးခဲ့သည့်တစ်မိနစ်အလိုအရတစ်ဦးအရူးစီမံကိန်းကိုနှင့်အတူလေ့လာမှုများအတွက်နောက်ဆုံးရောက်ရှိခဲ့သည်! နိုင်ငံတော်သမ္မတအာဒိုဂန် CHP အစ္စတန်ဘူလ်ခိုင်မာ Channel ကိုရှင်းပြဖို့ပြင်ဆင်နေနေပါသည်!
စီမံကိန်းကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် Channel ကိုအစ္စတန်ဘူလ်နောက်ဆုံးမိနစ်! စင်္ကြံအဆိုပါတူးမြောင်းအစ္စတန်ဘူလ်မကြာသေးမီကရရှိခဲ့ထောက်လှမ်းရေးအကြီးစားစီမံကိန်းများကိုအကြောင်းပြောနေတာကြသည်! စီမံကိန်းရှင်းပြဖို့Yenikapı'danကသမ္မတအာဒိုဂန်, Channel ကိုအစ္စတန်ဘူလ်အတွက်ကုန်သွယ်ရေးကိရိယာများမှတုံ့ပြန်မှုဖြစ်သော CHP အစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်မြူနီစီပယ်မြို့တော်ဝန် Ekrem İmamoğlu! နိုင်ငံတော်သမ္မတအာဒိုဂန်ဟာ CHP အစ္စတန်ဘူလ်ခိုင်မာ Channel ကိုသောပြောဆိုချက်ကိုရှင်းပြဖို့တစ်ဗုံးနဲ့တူကျဆင်းစည်းရုံးတိုက်တွန်း!
30 ဟာမျှော်လင့်ထားကျိကျိတက်အစ္စတန်ဘူလ်တူးမြောင်းစီမံကိနျးအတှကျသြဂုတ်လအတွင်းကတင်ဒါလုပ်ငန်းစဉ်၏ပစ်လွှတ်မီ, ဆီးရီးယားတင်းမာမှုများနောက်ဆုံးအရေးကြီးတဲ့ပြင်ပဖြစ်ရပ်များကြုံတွေ့, အစ္စတန်ဘူလ်တူးမြောင်းစီမံကိန်းကိုအတွက်နှောင့်နှေး d'ဆောင်သော၏ Channel ကိုနည်းနည်းအစ္စတန်ဘူလ်အတွက်တရားဝင်အကောင်အထည်ဖော်လိမ့်မည်!
နိုင်ငံတော်သမ္မတအာဒိုဂန် Channel ကိုအစ္စတန်ဘူလ်ရှင်းပြဖို့
အစ္စတန်ဘူလ်မကြာသေးမီကတာဝန်ရှိသူတစ်ဦးကကြေညာချက် လုပ်. နောက်ဆုံးပေါ်အခြေအနေအကြောင်းလိုအပ်သောသတင်းအချက်အလက်မျှဝေဖို့အခိုင်အမာကြောင်းအစ္စတန်ဘူလ်န်ကြီးချုပ် Recep Tayyip Erdogan ရဲ့ Channel ကို Mega စီမံကိန်းများပိုမိုယုံကြည်စိတ်ချရသောနှင့်ပိုပြီးကွဲပြားခြားနားသောရှုထောင်သယ်ဆောင်မည်! နိုင်ငံတော်သမ္မတအာဒိုဂန်, "ဒီအစိုးရသည်ဤစီးပွားရေးအခြေအနေများ Channel ကိုအစ္စတန်ဘူလ်အောင်မနိုင် CHP" တူးမြောင်းအစ္စတန်ဘူလ်စီမံကိန်းကို dreaminess "မှမြင့်တက်!" တုံ့ပြန်မှုများတွင်အစ္စတန်ဘူလ် Channel ကိုဖော်ပြချက်နှင့် ပတ်သက်. balk မှမကြာမီလုပ်ပါလိမ့်မယ်။
စီမံကိန်းအပေါ်ကိုရီးယားနှင့်တရုတ်ကုမ္ပဏီများ၏ Channel ကိုအစ္စတန်ဘူလ်ကြီးမြတ်အကျိုးစီးပွား။ ဒါ့အပြင်ကိုရီးယားကုမ္ပဏီတွင်တည်ရှိသည်ယခင်က Dardanelles တံတားစီမံကိန်းအစ္စတန်ဘူလ် Channel ကိုများအတွက်အကြီးမားဆုံးကိုယ်စားလှယ်လောင်း။ ဒါပေမယ့်လည်း Build-Operate-လွှဲပြောင်းမော်ဒယ်တရုတ်အစ္စတန်ဘူလ် Channel ကိုပုံစံမျိုးရယူ။ channel ကိုများအတွက်တင်ဒါလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်ကိုရီးယားနှင့်တရုတ်ကုမ္ပဏီများအစ္စတန်ဘူလ်အတွက်ယှဉ်ပြိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ဘယ်လိုအများကြီးအစ္စတန်ဘူလ်၏ channel ကုန်ကျစရိတ်?
ပို့ဆောင်ရေးနှင့်အခြေခံအဆောက်အဦဝန်ကြီး Cahit Turhan နေဖြင့်ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်ခဲ့အကြီးစားစီမံကိန်းများ၏ကုန်ကျစရိတ်၏ 15 ဒေါ်လာဘီလျံမတိုင်မီ Channel ကိုအစ္စတန်ဘူလ်။ သူကဧရာမအကြီးစားစီမံကိန်းများကိုဖို့နှစ်သစ်ကြိုဆိုပွဲအတွက်လွန်ခဲ့သညျ။ တူရကီရဲ့ Kanal အစ္စတန်ဘူလ်စီမံကိန်းအတွက်တရားဝင်တစ်နှစ် 2023 လှုပ်ရှားမှုများတွင်စတင်လိမ့်မည်! (အဆိုပါ Boxerdergi)
အဘယ်သူသည် Nesin Dee သင်တန်းအမှတ်စဥ်တူးမြောင်းအစ္စတန်ဘူလ်လိမ့်မည် Bits ကသမ္မတအာဒိုဂန်, 12 / 04 / 2016 အစ္စတန်ဘူလ် Channel ကို Bits ဖို့အဘယ်အရာကိုသင်တန်းကပြောပါတယ်တဲ့သူကသမ္မတအာဒိုဂန်: နိုင်ငံတော်သမ္မတအာဒိုဂန်သည်တူးမြောင်းအစ္စတန်ဘူလ်နှင့် ပတ်သက်. တူရကီရဲ့ '' အရူးစီမံကိန်းကို '' နောက်ဆုံးအချက်တင်ကြ၏။ "ငါသညျထှကျသူမြားကိုငါ၏ချစ်ပြုလိမ့်မည်။ အဆိုပါရုပ်သံလိုင်းအစ္စတန်ဘူလ်၌ဖြစ်လိမ့်မည်။ သငျသညျဆိုသညျကားဘယ်သို့ပြုကြလိမ့်မည်ကိုအဘယ်သူ Channel ကိုအစ္စတန်ဘူလ်, "န်ကြီးချုပ် Recep Tayyip အာဒိုဂန်, နံနက်ယံ၌Haliçကွန်ဂရက်စင်တာမှာကျင်းပနှင့်စမတ်မြို့ကြီးများမြို့ပြသစ်များအစားထိုးစိုက်ပျိုးသည့်ကွန်ဂရက်မှာမိန့်မြွက်တော်မူ၏။ အဆုံး 2002 သည်အထိ TOKI ရုံ 43 တထောင်အိုးအိမ်သူကပြောတယ်သူသည်လက်ရှိတွင် 710 အာဒိုဂန်ကပြောပါတယ်မူကြောင်းကိုထောင်ပေါင်းများစွာပြဿနာရောက်ရှိညွှန်ပြနေကြသည်။ ။ "အဲဒီအချိန်တုန်းကငါသည်လည်း 500 ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်မှန်းချက်စီးလူတိုင်းသည်ဤအမြီးအမောက်တွေနဲ့ချဉ်းကပ်ခဲ့ပါတယ် '' သင်ပြုသွားပုံကိုလည်းသင်တို့အပေါ်မှာလာကြ 'လို့သူတို့ကဆိုပါတယ် 500 တထောင်။ ...
နိုင်ငံတော်သမ္မတအာဒိုဂန်ဧဝံဂေလိတရားကို Channel ကိုအစ္စတန်ဘူလ်အားပေးတော်မူပြီ 10 / 10 / 2016 နိုင်ငံတော်သမ္မတအာဒိုဂန်အစ္စတန်ဘူလ်အတွက်သတင်းရုပ်သံလိုင်းကိုပေး၏: ဥရောပအာရှဥမင်လိုဏ်ခေါင်းစမ်းသပ်မှုအခမ်းအနားနိုင်ငံတော်သမ္မတ Recep Tayyip အာဒိုဂန်အတွက်ကြေညာချက်ကို လုပ်. , channel ကိုလည်းအစ္စတန်ဘူလ်၏ဧဝံဂေလိတရားကိုအပ်ပေးတော်မူ၏။ ဥရောပအာရှဥမင်လိုဏ်ခေါင်းစမ်းသပ်ခြင်းန်ကြီးချုပ် Recep Tayyip အာဒိုဂန် Channel ကိုအစ္စတန်ဘူလ်သတငျးကောငျးပေးသောအခမ်းအနားတွင်ကြေညာချက်ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ အစ္စတန်ဘူလ်အာဒိုဂန်များတွင်မီးရထားရာစုတူးမြောင်းစီမံကိန်းကိုကိုလည်း '' တူးမြောင်းအစ္စတန်ဘူလ် Project မှငါမျှော်လင့်ပါတယ်နောက်တစ်ကြိမ်လေလံတင်ရောင်းချပါလိမ့်မည်ရည်ညွှန်း။ သူတို့ Marmara ၏ပင်လယ်ပြင်ချိတ်ဆက်တဲ့ရုပ်သံလိုင်းပင်လယ်နက်ကြောင့်သူဟာသိပ်ကိုအရေးကြီးပါတယ်။ အခြားခြေလှမ်းအဖြစ်အတူတကွဤအရာအားလုံးသည်ကျွန်မသန်းဘီလီယံ 1 250, သင်တန်း, ထိပ်တန်းအရေးပါမှု၏, ဤစီမံကိန်းများ၏စျေးနှုန်းကိုမျှော်လင့်ပါတယ်။ '' ဟု၎င်းကပြောသည်။
နိုင်ငံတော်သမ္မတအာဒိုဂန် Antalya လေဆိပ် Express ကိုရထားနှင့်ဧဝံဂေလိတရား! 14 / 08 / 2017 ဝန်ကြီးချုပ် Recep Tayyip အာဒိုဂန်သည်ကုန်စည်ပြပွဲကွန်ဗင်းရှင်းစင်တာ, ပြည်နယ်အကြံပေးအစည်းအဝေးတိုးချဲ့ပါတီတက်ရောက်ခဲ့သည်။ လေဆိပ်ကသမ္မတအာဒိုဂန်အဘို့စီစဉ်ထားအစည်းအဝေးမိန့်ခွန်းစီမံကိန်းကိုရည်မှတ်ထုတ်ပြန်ချက်များကိုဖန်ဆင်းဖုံးလွှမ်းတက်ရောက်ခဲ့သည်။ သူ၏မိန့်ခွန်းထဲမှာ ANTALYA AIRPORT သတငျးကောငျးန်ကြီးချုပ် Recep Tayyip အာဒိုဂန်, က Antalya အမြဲအထူးဖြစ်ပြီးတတိယလေဆိပ်၏ဧဝံဂေလိတရားကိုပေး၏ကိုဖန်ဆင်းတော်မူကြောင်းကိုအလေးပေး။ "ကျနော်တို့ကပြုလုပ် Antalya ဖို့လုံလောက်တဲ့မဟုတ်ဘူးဟုဆိုသည်။ အရှေ့ဘက်ရန်, ငါတို့Gazipaşaဒုတိယလေဆိပ်တည်ဆောက်ခဲ့ပါတယ်။ အခုတော့ကျနော်တို့ပြင်ဆင်မှုအတွက်တတိယလေဆိပ်၌ရှိကြ၏။ အသစ်အတွက် Antalya ၏အနောက်ဘက်အခြမ်းအပေါ် 850 သန်းပေါင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုန်ကျစရိတ်ဆောက်လုပ်ရေးအတွက်မျှော်လင့်ချက်ရဲ့အဆုံးတိုင်အောင်အစတင်ဖို့သောလေဆိပ်နှင့်နောက်ပိုင်းတွင် 2021 န်ဆောင်မှုအတွက် ...
အဆိုပါမြေအောက်ရထားဝငျကမျြးKonyalıဖို့အာဒိုဂန်ကသမ္မတ 18 / 12 / 2018 ဝန်ကြီးချုပ် Recep Tayyip အာဒိုဂန်တို့တွင်စုစုပေါင်း 1 464 ဘီလီယံခန့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၏ဘယ်မှာဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားမြှို့နယ်များတွင်ပြည်သူ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသန်းပေါင်ဟာ Konya တဲ့ Metropolitan ဝင်ရောက်ခဲ့သည်။ "Hz ။ သူက Mevlana သွားကြဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုကိုက်ညီခြင်းမရှိပါပြောပါတယ်ဆိုလျှင်, "သမ္မတအာဒိုဂန်ကဆိုပါတယ်, Konya သူတို့ခညျြးလာမယ့်ခဲ့ကြသည်ဟုဆိုသည်။ အာဒိုဂန်ဟုသူကဆိုသည်: "ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့သယ်အလုပ်၏အများပြည်သူဖွင့်လှစ်မှာဘီလီယံခန့် 1 464 99 ၏စုစုပေါင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုန်ကျစရိတ်သန်းပေါင်။ သင်သိသည့်အတိုင်းကျနော်တို့နှောင်းပိုင်းတွင်ပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့အစိုးရ၏ဒုတိယ 100 နေ့စဉ်ပန်းတိုင်ကြေညာခဲ့သည်။ သူတို့ထဲမှတစ်ဦး Konya အမြင့်မြန်နှုန်းရထားဘူတာဝန်ဆောင်မှုတင်သွင်းဖို့ဖြစ်တယ်။ အခြားအ Necmettin Erbakan တက္ကသိုလ် - Meram မြူနီစီပယ်အကြားအလင်းရထားလမ်း၏ဝယ်ယူရေးဆေးလိပ်ဖြတ်ဖို့ပဲ။ ကျွန်ုပ်တို့၏အသစ်သောဘူတာရုံအဆောက်အဦ ...
ထို့နောက် Channel ကိုအစ္စတန်ဘူလ်အရာယခုအချိန်တွင်နိုင်ငံတော်သမ္မတအာဒိုဂန်, 30 / 10 / 2016 နိုင်ငံတော်သမ္မတအာဒိုဂန်, ထို့နောက် Channel ကိုအစ္စတန်ဘူလ်အရာယခုအချိန်တွင်သမ္မတအာဒိုဂန်, တူရကီအထက်တန်းမြန်နှုန်းရထားဟာရထားဘူတာမှာမိမိသဘောထားမှတ်ချက်ခုနှစ်တွင်တူးမြောင်းအစ္စတန်ဘူလ်ဖွင့်လှစ်စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်. သတင်းအချက်အလက်များပေးမည် 18 Marta 1915 သူတို့ Dardanelles တံတား၏သဲအခမ်းအနားမြှင့်သွားမည်ဟုဆိုသည်။ သမ္မတ, သေခြင်းဖူးပါတယ်လည်းဖြေကြားခဲ့သည်နှင့်အမျှော်လင့်ဟုအားဖြင့်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်ပြုပါပါလီမန် TCDD-Operate-လွှဲပြောင်းဖြတ်သန်းမော်ဒယ်တူရကီ YHT ဘူတာ, Ankaray ဆက်သွယ်မှုလုပ်ခံရဖို့, BAŞKENTRAYနှင့်Keçiörenမြေအောက်ရထားနှင့်ဆက်စပ်ခံရဖို့စီစဉ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်တည်ဆောက်ခဲ့သည်။36 ပလက်ဖောင်းနှင့်မီးရထားလမ်းစီမံကိန်းကိုတည်ရှိပြီး, က 194 460 တထောင်စတုရန်းမီတာကိုချွတ်ယူကမြေအောက်ခန်းများနှင့်မြေပြင်ကြမ်းပြင်အပါအဝင်စုစုပေါင်း 8 ကြမ်းပြင်ပါဝင်ပါသည်။ ...
အစ္စတန်ဘူလ်၏ channel ကုန်ကျစရိတ်
ကြောင့်အဆင်းလှသောနှောင်းပိုင်းမှညဥ့် izban နောက်ထပ်တောင်တက်မှာသည်အထိ
အဘယ်သူသည် Nesin Dee သင်တန်းအမှတ်စဥ်တူးမြောင်းအစ္စတန်ဘူလ်လိမ့်မည် Bits ကသမ္မတအာဒိုဂန်,
နိုင်ငံတော်သမ္မတအာဒိုဂန်ဧဝံဂေလိတရားကို Channel ကိုအစ္စတန်ဘူလ်အားပေးတော်မူပြီ
နိုင်ငံတော်သမ္မတအာဒိုဂန် Antalya လေဆိပ် Express ကိုရထားနှင့်ဧဝံဂေလိတရား!
ထို့နောက် Channel ကိုအစ္စတန်ဘူလ်အရာယခုအချိန်တွင်နိုင်ငံတော်သမ္မတအာဒိုဂန်,
နိုင်ငံတော်သမ္မတအာဒိုဂန်: အနာဂတျအတှကျ "တူရကီနှင့်တရုတ်ဘုံရှယ်ယာ Vision ၏ ''